အလုပ်လုပ်သောတိုက်ရိုက်မေးလ်! | Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, ဇန်နဝါရီလ 9, 2007 အင်္ဂါနေ့, ဇွန်လ 9, 2015 Douglas Karr
ငါဒီအကြောင်းနှစ်သစ်ကူးမတိုင်မီကတည်းကရေးသားဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့ပေမယ့်ငါမကြာသေးမီကငါရရှိခဲ့တိုက်ရိုက်မေးလ်အချို့ပုံရိပ်တွေကိုအတူတကွဆွဲရန် ol ol scanner ထွက်ရခဲ့ရတယ်။ အောက်ခြေလိုင်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ် အချို့သော တိုက်ရိုက်မေးလ်နေဆဲအလုပ်လုပ်သည်။ နမူနာ ၃ ခု
ဂျက်ဟီအို ငါ့ကိုသူ့စာအုပ်ပို့လိုက်တယ် ပျံနေသည့်ဝက်၏ဥာဏ်ပညာ။ ငါထင်တာကတော့ဘလော့ဂါတစ်ယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော့်ရဲ့ပထမဆုံး 'လက်ဆောင်' ပဲ။ ကျွန်ုပ်၏ညနေခင်း၌စာအုပ်နှစ်အုပ်ပါ ၀ င်ပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော်ဤစာအုပ်ကိုတူးဖော်ရန်ကျွန်ုပ်မျှော်လင့်နေပါသည်။ စာအုပ်နှင့်အတူဂျက်ထံမှလက်ရေးမှတ်စုရရန်တကယ်သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဂျက်ခ်ကငါ့ကိုစာရေးဖို့နဲ့စာအုပ်ပို့ဖို့အချိန်ယူပြီးအများကြီးပါပဲ။
CVS ဆေးကုသမှုသည်အားလပ်ရက်များအတွက်ငါ့ကိုကဒ်ပြားပို့ပေးပြီးကျွန်ုပ်၏ထောက်ပံ့ပေးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ၎င်းကို ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး စီမှပင်ကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ အကြှနျုပျ၏ CVS စိတ်ကူးဖြစ်ပါတယ်။ Newtown Connecticut ရှိကြီးထွားလာသောကြီးကျယ်ခမ်းနားသောနေရာများသို့သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ဖူးသည့်ကျွန်ုပ်တို့၌ ၀ န်ဆောင်မှုပေးခဲ့သည့်ထောင့်စတိုးဆိုင်ကြီးကိုကျွန်ုပ်အားတကယ်သတိရစေပါသည်။ ... လူအိုငါဖြစ်၏!) ။ CVS တွင်အသီးများရှိပါကကျွန်ုပ်သည်ကုန်စုံဆိုင်သို့မသွားနိုင်ပါ။ CVS ကသင်သည်ကြီးမားသောကွင်းဆက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်ပြီးသင့်အိမ်နီးချင်းကဲ့သို့လူများကိုဆက်ဆံနေဆဲဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြသည်။
Wikimedia ငါ့ကိုလှူဒါန်းမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းမှတ်စုတစ်ခုနှင့်အတူငါ့ကိုကဒ်ပို့ပေးပါ ဝီကီပီးဒီးယား မနှစ်က။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ Paypal ရန်ပုံငွေများကိုမကြာခဏယူပြီးသူတို့အားဆော့ဖ်ဝဲသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကအသုံးဝင်ပါကလှူဒါန်းရန်တောင်းခံသည့်ပလပ်ဂင်တီထွင်သူများနှင့် ၀ ဘ်ဆိုဒ်များကိုပြန်လည်ပေးသည်။ ငါသည်ဤဘလော့ဂ်တွင်ဝီကီပီးဒီးယားကိုအများကြီးအသုံးပြုသည်။ ထို့ကြောင့်သင်ကြော်ငြာ၏ရရှိသောတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း၏အစိတ်အပိုင်းများကိုအခြားဆိုဒ်များသို့လှိမ့်ထားကြောင်းသိရ။ သင်ဝမ်းသာပါလိမ့်မည်။ (ကျန်တဲ့ကျန်တဲ့ဟာငါ့သားကောလိပ်ပညာရေးအတွက်ပေးဖို့လိုတယ်။ )
ယနေ့ခေတ်နှင့်ခေတ်တို့တွင်ရှေးရိုးရာများက 'လူသား' ထိတွေ့မှု၏အဓိပ္ပာယ်ကိုဆက်လက်အသိအမှတ်ပြုဆဲဖြစ်သည်။ Jack ကသူ့စာအုပ်ကို Amazon ကနေတစ်ဆင့်ပို့ပေးနိုင်တယ်။ CVS နဲ့ Wikimedia တွေကလည်းကျေးဇူးတင်တဲ့အီးမေးလ်ကိုအလွယ်တကူပို့ပေးနိုင်တယ်။ ငါကအီးမေးလ်ကိုထောက်ခံသူတစ်ယောက်ပါ။ သူကအလိုအလျောက်ပြုလုပ်နိုင်တာကိုကျွန်တော်ကြိုက်ပါတယ်။ ဒါကနည်းနည်းပိုပြီးအားစိုက်ထုတ်ယူရတယ်၊ ဒါကဒီလူတွေကကျွန်တော့်ကိုသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်အရေးကြီးတယ်လို့ထင်တဲ့အတွက်ငါ့ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသင့်တယ်။ ဒါကပြင်းထန်တဲ့သတင်းစကားမဟုတ်လား။
၎င်းသည်အလုပ်လုပ်သောတိုက်ရိုက်မေးလ်အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ အခြားထောင်နှင့်ချီသောကျွန်ုပ်တို့ရဲ့မေးလ်ပို့သောနေရာကိုမဖော်ပြသင့်ပါ။ တစ်စုံတစ် ဦး ၏တိုက်ရိုက်မေးလ်ဖြင့်သင်အာရုံစူးစိုက်ရမည့်အချိန်ပမာဏသည်စာတိုက်ပုံးမှအမှိုက်ပုံးသို့သွားရန်အချိန်ယူရမည့်အကြောင်းအချိန်ကာလကိုဖောက်သည်များအားကျွန်ုပ်ပြောခဲ့သည်။ ငါမှာလုံးလုံးစိတ်ထဲမပြောင်းပါဘူး။ လက်ဖြင့်ရေးထားသောအထုပ်တစ်ခု (သို့) ကျေးဇူးတင်သည့်ကဒ်ကိုပို့ခြင်းကကျွန်ုပ်၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်နိုင်လိမ့်မည်။
ဇန်နဝါရီ 9, 2007 မှာ 9: 29 AM
အတိအကျ။ ကျနော်တို့လူသားတွေရဲ့ထိတွေ့မှုကိုလိုချင်တယ်။ ဒါကဘလော့ဂ်တွေဘာကြောင့်ဒီလောက်ကြီးလာရတာလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ခမ်းနားသောမိဘများသည်လက်ဖြင့်ချစ်သောမေတ္တာစကားဖြင့်ဆက်သွယ်လေ့ရှိသည်။ ဒီနေ့မြန်မြန် SMS ပါ မတူတာတော့မဟုတ်ဘူးလား။
ဇန်နဝါရီ 9, 2007 မှာ 10: 57 AM
> ပျံနေသည့်ဝက်၏ဥာဏ်ပညာ။ ငါသည်ဤငါ့အမှန်တကယ်ပထမ ဦး ဆုံးလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်သည်ထင်? ဘလော့ဂါတစ်ယောက်လို
ဂရုစိုက်သောဒေါက်ဂလပ် - လက်ဆောင်များကိုလက်ခံခြင်းသည်သင်၏ကျင့်ဝတ်နှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်စေနိုင်သည်ကိုသင်မသိခဲ့ပါ။ 🙂 LOL
> ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ Paypal ရန်ပုံငွေများကိုမကြာခဏယူပြီး၊ သူတို့၏ဆော့ဖ်ဝဲသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုသည်အသုံးဝင်ပါကလှူဒါန်းရန်တောင်းခံသည့်ပလပ်ဂင်တီထွင်သူများနှင့် ၀ ဘ်ဆိုဒ်များအားပြန်လည်ပေးအပ်သည်။
ဇန်နဝါရီ 9, 2007 မှာ 11: 18 AM
9:2007 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 4, 51
ဒီမှာကြော်ငြာရှင်အားလုံးသတိထားမိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်စျေးပေါ၊ လွယ်ကူပြီးရိုးသားသည်။ မင်းငါ့ကို ၀ ယ်လို့ရပေမယ့်ငါ ၀ ယ်ပြီဆိုတာလူတိုင်းကိုပြောပြမယ်။ 🙂
ငါ Paypal သဘောတူတယ် အဲဒါဟာဆက်သွားမယ့်လမ်းကြောင်းပဲလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။ ပွင့်လင်းတဲ့အရင်းအမြစ်ကငါတို့အားလုံးအတွက်ကောင်းတယ်။
9:2007 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 4, 54
ဒေတာဗေ့စ်စျေးကွက်တစ်ခုအနေနှင့်ဤကုန်ကျစရိတ်ကိုတွက်ချက်ရန်ခက်ခဲသည်မဟုတ်လော။ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကတစ်ခုခုကိုတိုင်းတာလို့မရဘူး၊ 'မှန်ရာကိုလုပ်သော' ကုမ္ပဏီများသည်အမှန်တကယ်တိုးတက်လာသည်။ တစ်နေ့နေ့မှာကုမ္ပဏီတွေအတွက်လူမှုရေးအကျိုးခံစားခွင့်ညွှန်းကိန်းတစ်ခုရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တကယ်ယုံကြည်တယ်၊ ဒါကြောင့်လူတွေဟာမကောင်းတာထက်တိုင်းပြည်အတွက်ပိုပြီးအကျိုးရှိစေမယ့်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ကြလိမ့်မယ်။
9:2007 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 10, 52
မှန်ရာကိုလုပ်ခြင်းသည်ကောင်း၏။ ထိုအခါငါကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်သောကုမ္ပဏီများနောက်ကွယ်မှရပထမ ဦး ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤလုပ်ဆောင်မှုများအတွက်အချိန်ဖြုန်းခြင်းသည်ရုပ်မြင်သံကြားကြော်ငြာတစ်ခုတွင်ပိုက်ဆံဖြုန်းခြင်းထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ROI ကိုမောင်းစေသည်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကကျွန်ုပ်သည် Hallmark မှရှေးရှေးများနှင့်အတူအခန်းတစ်ခန်းတွင်ထိုင်ခဲ့သည်။ သူတို့သည် CRM စနစ်နှင့်ဆက်စပ်နေသောကျွန်ုပ်ကုမ္ပဏီအတွက်အလိုအလျောက်ကျေးဇူးတင်သည့်အစီအစဉ်ကိုဖန်တီးချင်ကြသည်။ ငါထင်တာကမင်းကထောက်ခံတာနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပဲ။ ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်း, ကောင်းသောအရာကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အမြတ်အစွန်းမောင်းထုတ်ရန်ကြိုးစားနေအကြားထိုကဲ့သို့သောကောင်းသောလမ်းကိုရှိပါတယ်။ သင်၏အချက်အနေနှင့်သင်ကောင်းသောအမှုကိုပြုလျှင်ရောင်းအားနှင့်အမြတ်အစွန်းသည်နောက်သို့လိုက်လိမ့်မည်။
10:2007 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 9, 47
ငါ "လူ့ထိတွေ့မှု" နှင့်ပတ်သက်။ သင်၏ထင်မြင်ချက်ကိုအလွန်တရားဝင်သည်ထင်ပါတယ်။
ဒီထက်နည်းယုံကြည်စိတ်ချရသော။ spam နှင့် junk လွန်းခြင်း။ ဒါဟာစိတ်ပျက်စရာဖြစ်လာတယ်
တိုက်ရိုက်စာတိုက်၊ သို့သော်, သင်လူ့ "ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းအရောင်းပိတ်ဖို့ရန်ဆက်လက်
Multi- channeled စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၌တည်၏။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမော်တော်ယာဉ်တစ်စီးအပေါ်တွင်သာမှီခိုအားထားနိုင်တော့မည်မဟုတ်ပါ
မင်းရဲ့ဆောင်းပါးကိုကျွန်တော်တကယ်ပျော်ခဲ့တယ်။ မင်းမှာ avid စာဖတ်သူအသစ်တစ်လုံးရှိတယ်။
အဲဒါကိုခေါ်ပါနှင့်အစစ်အမှန် "စာတိုက်မေးလ်" သက်သေပြနေဆဲဖြစ်သည်